देबी जस्ती सन्तोषीको मन्दिरकै छेउमा कस्ले गर्यो ह त्या ? के सन्तोषी गर्भवती थिइन् ? घटनास्थलमा प्रत्येक्ष्य हेर्दा देखियो यस्तो प्रमाण , हेर्नुहोस भिडियो « Etajakhabar
प्रहरीले सन्तोषीले बोक्ने गरेको मोबाइल नम्बर पत्ता लगाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरीले उनको घटना योजनावद्ध भएको निष्कर्ष निकालेको छ । केही ब्यक्तिहरुलाई निगरानीमा राखेर अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाउको छ । घटनास्थलमा सन्तोषीका भित्रि वस्त्र यत्रतत्र थिए । शरिरमा पनि विभिन्न स्थानमा चो ट थियो ।